Ma mooddaa in Dowladda Federaalku ay qaadatay go’aan wanaagsan oo ku aadan khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka? | Monday, June 26th, 2017	Home
Ma mooddaa in Dowladda Federaalku ay qaadatay go’aan wanaagsan oo ku aadan khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka?
Jun 12, 2017 - jawaab	Inta aanan ka hadlin go’aanka ay qaadatay Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan khilaafka u dhaxeeya dowladaha Khaliijka in uu go’aankaasi yahay mid wanaagsan iyo in kale. Aan marka hore ka warammo labo qodob oo muhiim, Kuwaaasi oo kala ah: Waxa ay dowladi tahay iyo waxa saldhigga u ah khilaafka ka dhex jira Qadar iyo dowladaha cunaqabateynta saaray ee uu Sacuudigu ka mid yahay. Ka hadalka labadan qodob, Waxa ay noo iftiimin doonaan waxa uu noqon karo go’aanka ay qaadan karto Dowladda Federaalka ee uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo.